သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်းက သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်​ငွေ -
သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်းက သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်​ငွေ
March 1, 2018 - by Saing Pyin Gyi
အာရပ်နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ချမ်းသာလဲ ဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံမှာတောင်းစားတဲ့ သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်​ငွေဟာ နိုင်ငံအများစုမှာ ပညာရှင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေထက်တောင် များတယ်ဆိုရင် သင်ယုံနိုင်ပါ့မလား..?
တောင်းစားတဲ့သူတွေဟာ ဒူဘိုင်းကို တရားဝင်ခရီးသွားဗီဇာနဲ့ ဝင်ရောက်လာကြပြီး အချိန်သုံးလအတွင်းမှာပဲ အကျိုးအမြတ်အများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ တောင်စားတဲ့နေရာမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်နေတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်လဝင်ငွေဟာ ဒူဘိုင်းငွေကြေး ၂၇၀,၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃,၅၀၀) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းတစ်ထောင်နီးပါး ဝင်ငွေရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ် သိန်းတစ်ထောင် ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်း ရှိရင်တောင် အရမ်းရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
တောင်းစားသူတွေဟာ လူတွေရဲ့ သနားကြင်နာ၊ ဂရုဏာသက်မှုတွေအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသားတွေအပေါ် လုပ်စားနေတယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ရဲတွေအနေနဲ့ ဒါတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အာရပ်နဲ့ အာရှဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေက နိုင်ငံထဲကို လူတွေခေါ်သွင်းလာပြီး တောင်းစားခိုင်းကာ ပြန်လည်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေရှိနေကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်အချို့က ရေးသားကြပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမှာ တရားဝင်တောင်းစားခွင့်မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လိုက်လံတောင်းစားနေသူတွေက သာမန်မြင်တွေ့နေကျ သူတောင်းစားတွေမျိုးမဟုတ်ပဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ခေါ်ရမယ့်သူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တစ်ခါတောင်းရင် တစ်ဆယ် တစ်ရာမျိုးတောင်းတာမဟုတ်ပဲ အနည်းဆုံး ဒူဘိုင်းငွေ တစ်ထောင် (ဒေါ်လာ ၂၇၀) လောက်က စတောင်းပါတယ်၊ သနားပြီး အမှန်တစ်ကယ်ပေးသွားတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ အလုံးရင်းနဲ့ ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတွေအနနဲ့ သူတောင်းစားနှိမ်နင်းရေးကို လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအသွင် ခပ်စိပ်စိပ်လုပ်ဆောင်လာပြီး ပြီးခဲ့နှစ်က ပထမဆုံးတစ်ရက်ထဲမှာတင် ၆၅ ယောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ခရီးသွားဗီဇာ သုံးလဖြင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပုရိသတွေရဲ့အသည်းတခြမ်း DJ မလေး (သို့) DJ Soda ရဲ့ အကြောင်း
မယားငယ်များကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီး ဆုံးမပေးနေတဲ့ ကြေးစား အမျိုးသမီး ဖိုက်တာ
အစ္စရေး တပ်မတော်၏ စစ်မြေပြင် အသုံးချ အစွမ်းထက် လက်နက် (၅) မျိုး
Previous Article မယားငယ်များကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီး ဆုံးမပေးနေတဲ့ ကြေးစား အမျိုးသမီး ဖိုက်တာ
Next Article သာသနာ့ဘောင်မှာ ထာဝရ ပျော်မွေ့တော့မှာဖြစ်တဲ့ ဆရာလေး
ပုရွက်ဆိတ်တက်နေတဲ့ အရွက်လေးက သိန်းတစ်သောင်းပေးသွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်ယုယုရဲ့ ကံကြမ္မာ
လက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်နေချိန် ရည်စားဟောင်းအမျိုးသမီးက ၂ ဦးလုံးကို ဓားဖြင့်ထိုး
တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း ၆၀ အထက်ရှိသူတွေ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမည်
မယားငယ်ကို အိုင်ဖုန်း ဝယ်ပေးရန် မိမိဂွေးဥ မိမိ ဖြတ်ရောင်းသော်လည်း မိန်းမဖြစ်သူက ရဲကို တိုင်သဖြင့် အဖမ်းခံရ
အမွေလိုချင်သော သားက လူငှားပြီး သတ်ခိုင်းစဉ် မိဘတွေက အသတ်ခံရသလို ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးဖြစ်‌လာမဲ့‌ ရေပေါ်မြို့ သ‌င်္ဘောကြီး
ပန်းချီကားထဲက အမျိုးသမီးကို အလွယ်တကူ မြင်ရလား … ?
ရေသန့်ဘူးဝယ်တဲ့အခါ ဒါတွေကို အထူးသတိထား ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ
” မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ( ၂၅ ) ပါး “
Saing Pyin Gyi © 2018 - All Rights Reserved.